အလှဲအလှယ် – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on February 22, 2021 Author admin	Comments Off on အလှဲအလှယ်
စိတ်ထဲမှာ မျော်လင့်နေတာ ဝန်ခံမိတယ် . ဒါပေမယ့် လက်တွေကြီး ကျတော့ ကျွန်တော် စိတ်တွေ ခြောက်ချား သွားတယ် ။ ဝင့်ဝါ တဲ့ ။ လှတ ပတ ကောင်မလေး ။ ခန္တာကိုယ်က အိုးတောင့်တောင့် မဟုတ်ပေမယ့် သွယ်သွယ်လျလျလေးနဲ့ ။ ခေတ်လူငယ် ဆိုတော့လည်း အဝတ်အစား ဒီဇိုင်းက ခပ်ဟော့ဟော့ ။ ဝင့်ဝါ ကိုခုမှ မြင်ဖူး သိဖူး တာလည်း မဟုတ် ။ နွေရာသီဆိုတော့ ရာသီဥတုကပူတော့ ကျွန်တော် နဲ့ မိန်းမ မေသူ ညအိပ်ယာဝင်ရင် ခြင်ထောင် မထောင်တော့ဘူး . ပူလို့. အိုက်လို့ပန်ကာလေး ဖွင့်ပြီး အိပ်ရတယ် . လေပန်ကာ ကလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ မသင့်လျော်တော့ ခက်သား . အိပ်ရာဝင်ခါနီး ဆေးလိပ်သောက်တတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့် ကျတော် ဆေးလိပ်ပြာခွက် ကို အိပ်ယာဘေး ချထားတယ် ။ အကျီ င်္လည်း ချွတ်အိပ်တာပေါ့ . ။ ရုတ်တရုပ် ဆေးလိပ်တို ကို ပြာချွေပြီး ပြန်အလှည့်မှာ ချစ်ဇနီးမေသူ ရဲ့ စကားလေးကြောင့် ကျတော် တုန်လှုပ်သွားမိတယ်။